December 2020 | Umbele
UMnu uMusa Makhunga umsunguli nomqondisi weHR Matters
UKUBONA igebe emkhakheni wezindaba zabasebenzi ezinkampanini kwenze ukuthi asungule inkampani esiyisixazululo kwabaningi ungoti wezakwandabazabantu nosomabhizinisi.
UNYAKA u-2020 ube nezigemegeme eziningi. Kuzona zonke indabizekwayo kube wukubheduka kweCOVID-19, eyenze kwavalwa izwe thaqa. Enye indabizekwayo yiKhomishini yokuGwamandwa koMbuso, eholwa yiPhini leNhloko yamaJaji uJaji uRaymond Zondo. Ubufakazi izakhamuzi nabakhokhintela … Read More
IMBONI yezitok’fela ngenye yalezo eziqhubekile zadlondlobala yize izimboni eziningi zishayekile njengoba abantu abazidlalayo beqhubekile ukulondoloza imali ngale ndlela.
UMnu uThabani Dube umsunguli wePizza Guy
Iciko elimakhonokhono, okubalwa kuwona ukupenda, ukubaza, ukucula nokudansa, lishaya isidlo samaNtaliyane esiconcisa amathe. ULANGA KHANYILE uxoxe nalo
IBHUNGU laseMlaza elinamathalente amaningi neliqeqeshelwe ubuciko bokudweba, phecelezi i-fine art, liveza ubuciko balo ngendlela ehlukile – esitofini.
UMnu u-Owen Nkomo namathiphu okusebenzisa imali ngamaholidi
UMnu uFaisal Mkhize iManaging Executive: Vehicle and Asset Finance e-Absa
Uwumakadebona embonini yamabhange osizwe wukunganqeni ukuvuka azithathe emva kokuqhuzuka esafunda. UMnu uFaisal Mkhize, ongesinye sezikhulu ze-Absa. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
ISIFUNDO asheshe wasifunda empilweni ngokuhlangabezana nezingqinamba sokuthi akumele udikibale bese ukhohlwa amaphupho akho yisona emsizile akwazi ukubhekana nezinselelo endleleni futhi aphokophele ukufeza amaphupho akhe
UNksz uLungile Mbili ungumnikazi wenkampani ekhiqiza imidlalo yethelevishini Umlando Creative
Ukuphokophela kumenze wakwazi ukuveza izindaba zabantu ngeso lomthwebuli ogxile ekukhiqizeni amafilimu. Uxoxe noZANELE MTHETHWA ngothando lwekhamera
WAHLULA umndeni wakhe uzama ukumkhipha emkhakheni wezobuciko owesifazane osenenkampani ekhiqiza imidlalo yethelevishini. UNksz uLungile Mbili ungumsunguli wenkampani Umlando Creative.
NGABE baningi abantu abasizakele emalini ebekelwe ukulwa nomphumela omubi weCOVID-19 ukube indlela okwenziwa ngayo eminyangweni kahulumeni ihlelekile futhi yenziwa ngesinono. Futhi ukube ezobuchwepheshe eminyangweni ziyashesha, zisebenza ngendlela eyiyo, iminyango iphakelana … Read More
UMnu u-Owen Nkomo uhlaziya izibalo zeGDP eziphume kuleli sonto
UMcwaningimabhuku-Jikelele omusha uNksz uTsakani Maluleke wethule umbiko wesibili ngemali yeCOVID-19
Kusekuningi okungahambi kahle endleleni okusetshenziswe ngayo imali eyabelwe ukunciphisa ubunzima obudalwe wukubheduka kweCOVID-19 kodwa ikhona inhlansi yethemba. USLINDILE KHANYILE uyabika
UKUNGENELELA masinyane kwehhovisi loMcwaningimabhuku-Jikelele ekucwaningeni ukuthi isetshenziswe kanjani imali eyabelwe ukulekelela umphakathi ngezindlela ezahlukene njengoba kuhlasele iCOVID-19 kusizile ukuthi kubuyiselwe emuva uR3.4 billion esikhwameni sikapoyinandi, i-Unemployment Insurance Fund (UIF) nobukhokhelwe abantu kungafanele
UNksz uNompakamo Dzanibe umsunguli weSmoothies Addict
Ushiye phansi umsebenzi, wakhetha ukuzimela onebhizinisi leziphuzo ezinomsoco. Uxoxe noNOKWANDA NCWANE.
UKUKHULA ngaphansi kwekhaya elinosomabhizinisi nokuhamba ekhaya ukuze azimele kugqugquzele owesifazane osemncane waseThekwini ukuthi aqale ibhizinisi lakhe, elingahlobene nhlobo nomkhakha awufundele.
UDkt u-Emmanuel Ngcobo, usihlalo weChartered Institute of Government Finance Audit and Risk Officers KwaZulu-Natali
Ukuphatha imali yabakhokhi bentela komasipala akuwona umdlalo futhi kudinga abantu abazoba nesibindi sokunqaba ukwenziswa okuphambene nomthetho. USLINDILE KHANYILE uyabika
ABANTU abaphatha izimali zikahulumeni kumele bafundiswe ukuzethemba ukuze bezoba nesibindi sokunqaba ukwenziswa okuphambene nomthetho kungakhathaleki ukuthi wubani osuke ebafaka ingcindezi.
Imfihlo yokukhulisa ibhizinisi ilele ekuphatheni amakhasimende ngesinono sekati, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngifisa sibhekisise ubudlelwano nabathengi, phecelezi i-customer service. Ukuba sebhizinisini akukho ngawe mnikazi webhizinisi kodwa kungabathengi obalethela umkhiqizo wakho.
Noma ukuthenga online kunobuhle kodwa kunobungozi bakhona
Kuyakhula ukuthengwa kwezimpahla kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanjemanje nasezitolo ezi-online kanti ‘nabashaya ikhadi’ bakhona nalana kwezobuchwepheshe.
IBHANGE loMbuso ngokubambisana neFinancial Sector Conduct Authority (iFSCA) nePayment Association of South Africa (iPASA) baxwayisa abathengi ngezinto okumele baziqaphele uma bethenga kwi-internet ukuqinisekisa ukuthi imali yabo ivikelekile.
UNksz uMinenhle Xulu umnikazi weYamaDonda Farm
Uhlephule emalini yeNSFAS ukuqala ibhizinisi lezinkukhu umlimi osafufusa. UZANELE MTHETHWA uxoxe naye
NGENKATHI abanye belahlekelwe yimisebenzi kuwa namabhizinisi ngenxa yegciwane iCOVID-19, isitshudeni sibone ithuba lokuba wumlimi.
UNksz uLisa Mthethwa noNkk uLona Mnguni bangabanikazi beFrutee Belliez
ZIYEKE umsebenzi zaqoma ukuziphilisa ngezithelo izelamani zaseThekwini ibhizinisi lazo eselithele nezinye izithelo. I-Frutee Belliez kaNksz uLisa Mthethwa nodadewabo uNkk uLona Mnguni yaqala samdlalo bezama ukutshala umqondo wokujwayela izidlo ezinempilo.
UMnu uSipho Maseko isikhulu esiphezulu eTelkom
UNEMINYAKA eyisikhombisa nezinyanga ezinhlanu ehola inkampani yezokuxhumana nezingcingo iTelkom kodwa ungafunga ukuthi yima esanda kuthatha izintambo indlela asathi uma ekhuluma ngomsebenzi wakhe uzwe umfutho, uthando, intobeko nesasasa kanti nasebusweni akusho yena, uyazibonela ukuthi usawuthakasela umsebenzi wakhe.
UNksz uZanele Mkhize umnikazi weZanele’s Vision Services eqeqesha izisebenzi zasendlini nabanakekela abagulayo
KUYAMKHATHAZA ukubona intsha ingasebenzi usomabhizinisi waKwaMashu, eThekwini, osevule amathuba kwabaningi.